ch 1 တမန်တော်ဝတ္ထု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / တမန်တော်၏တမန်တော် / ch 1 တမန်တော်ဝတ္ထု
1:1 မုချ, အိုသျောဖိလု, ငါသညျယရှေုလုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ကြောင်းအရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးဟောပြောချက်ရေးစပ်နှင့်သင်ပေးဖို့,
1:2 တမန်တော်ညွှန်ကြားချက်, အဘယ်သူကိုသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရှေးခယျြခဲ့, ပင်သူတက်ယူခဲ့သောအပေါ်ထားသောနေ့မရောက်မှီ.
1:3 ထို့အပြင်သူသည်ထိုသူတို့အားအသကျရှငျကိုယ်တော်တိုင်ပေးအပ်, မိမိအစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြပြီးနောက်, အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံးတလျှောက်လုံးသူတို့ကိုပေါ်ထွန်းနှင့်များစွာသော elucidations နှင့်အတူဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့အကြောင်းကိုစကားပြော.
1:4 သူတို့နှင့်အတူညစာစား, သူကသူတို့ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်မသင့်ကြောင်းသူတို့ကိုညွှန်ကြား, ဒါပေမဲ့သူတို့ခမည်းတော်၏ကတိတော်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်း, "သင်ကြားရသောအကြောင်းကို,"ဟုသူကဆိုသည်, "ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပါးစပ်ကနေ.
1:5 ယောဟန်သည်, တကယ်ပါပဲ, ရေ၌ဗတ္တိဇံ, သင်မူကားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟု, ယခု မှစ. ကျမြားမကွာ။ "
1:6 ထို့ကြောင့်, စုဝေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်, ဟုဆို, "သခင်, ဤသူသည်သင်တို့ဣသရေလအမျိုး၏နိုင်ငံကိုငါ့အားပြန်ပေးလိမ့်မည်သည့်အခါထိုအချိန်ကာလသည်?"
1:7 ဒါပေမယ့်သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: "ဒါဟာကြိမ်သို့မဟုတ်အချိန်လေးကိုသိရန်ကိုယ်မပိုင်, သောခမညျးတျောသညျမိမိကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာအားဖြင့်ထားတော်မူပြီ.
1:8 သင်တို့မူကားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏တနျခိုးခံရကြလိမ့်မည်, သငျသညျကိုကျော်ဖြတ်သန်း, သငျတို့သယေရုရှလင်မြို့၌ငါ့အဘို့မျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ရလိမ့်မည်, လူအပေါင်းတို့သည်ယုဒပြည်နှင့်ရှမာရိအတွက်, ပင်မြေကြီးစွန်းမှ။ "
1:9 ထိုမင်းသည်ဤအရာတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည်ပြီးမှ, သူတို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြစဉ်, သူချီခဲ့သည်, နှင့်တစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်အချိန်၌သူတို့မျက်မှောက်ကနေသူ့ကို ယူ..
1:10 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုကောင်းကင်သို့တက်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြစဉ်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, လူနှစ်ယောက်အဖြူရောင်အဝတ်၌သူတို့အနီးအပါး၌ရပ်လျက်.
1:11 ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်: ဂါလိလဲ "ယောက်ျား, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့တက်ရှာနေဤနေရာတွင်ရပ်ဘူး? ထိုယရှေု, ကောင်းကင်သို့သင်မှတက်ယူခဲ့ပြီးသူကို, သငျသညျသူ့ကိုသညျကောငျးကငျမှတက်မယ့်မြင်ကြပြီ့အတူတူလမ်းအတွက်ပြန်လာကြလိမ့်မည်။ "
1:12 ထိုအခါသူတို့ကတောငျပျေါမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာသော, လှငျသမုတ်သော, ဂျေရုဆလင်မှလာမယ့်အရာ, ဥပုသ်နေ့တနေ့ခရီးအတွင်းမှာ.
1:13 ထိုသူတို့ cenacle သို့ ဝင်. ပြီးမှ, သူတို့ဘယ်မှာပေတရုနှင့်ယောဟန်အရပ်တက်ပြီ, ယာကုပျနှငျ့အင်ဒရူး, ဖိလိပ္ပုနှင့်သောမတ်စ်, ဗာသောလမဲနဲ့မဿဲ, အာလဖဲရှိမုန်၏ဂျိမ်းဇေလုတ်, ယုဒနှင့်ဂျိမ်းစ်၏, တည်းခိုခဲ့ကြ.
1:14 ဤသူအပေါင်းတို့သည်မိန်းမနှင့်ဆုတောင်းပဌနာအတွက်တဦးတည်းအညီနှင့်အတူဇွဲရှိရှိခဲ့ကြသည်, နဲ့ Mary နှင့်အတူ, ယေရှု၏မယ်တော်, သူ့ညီနှင့်အတူ.
1:15 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ပတေရုသ, ညီအစျကိုတို့အလယ်၌ထ, ကပြောပါတယ် (ယခုလူများ၏လူအစုအဝေးလုံးဝအကြောင်းတရာနှစ်ဆယ်ခဲ့):
1:16 "Noble ကညီအစ်ကိုတွေ, ကျမ်းစာ၌မပြည့်စုံရလိမ့်မည်, သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ယုဒအကြောင်းကိုဒါဝိဒ်မင်း၏နှုတ်ဖြင့်ခန့်မှန်း, ယရှေုသညျဖမ်းမိသူမြား၏ခေါင်းဆောင်အဘယ်သူခဲ့သည်.
1:17 သူကကျွန်တော်တို့ကိုတို့တွင်အရေတွက်ခဲ့, သူကဒီဓမ်မအမှုအတှကျစာရေးတံကိုရှေးခယျြခဲ့.
1:18 နှင့်ဤသူသည်ဆက်ဆက်ဒုစရိုကျ၏လုပ်အားခထဲကနေတစ်အိမ်ခြံမြေသိမ်းယူ, ဆိုတော့, ဆွဲထားခံတော်မူပြီးမှ, သူကအလယ်၌ပွင့်လင်းကွဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, မိမိပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသွန်းလောင်း.
1:19 ဤရွေ့ကား, ယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့ကိုသိဖြစ်လာခဲ့သည်, ဒီလယ်ကိုသူတို့ဘာသာစကားခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်, Akeldama, ကြောင်း, '' သွေး၏ကွင်းဆင်း။ '
1:20 ဆာလံကမျြးစာ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏သိရသည်များအတွက်: '' သူတို့ရဲ့နေရာလူဆိတ်ညံလျက်ရှိစေနှင့်ကအတွင်းကျိန်းဝပ်သောသူတယောက်မျှမရှိစေခြင်းငှါ,'နဲ့' အခြားသူ၏အ Episcopal ယူကြပါစို့။ ''
1:21 ထို့ကြောင့်, ထိုသို့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, သခင်ယေရှုငါတို့တှငျနှင့်ထှကျသောတစ်ခုလုံးကိုအချိန်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့နှင့်အတူစုဝေးခဲ့ကြသူထိုလူတို့ထဲက,
1:22 ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုမှအစ, သူကျွန်တော်တို့ကိုမှတက်သိမ်းယူသောအခါနေ့တိုင်အောင်, အဲဒီထဲကသူ့အရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသကျသခေံစေ။ "
1:23 ထိုသူတို့နှစ်ဦးကိုခန့်အပ်ထားသော: ယောသပ်သည်, အမည်သစ်အမည်ရှိသော, ယုတ္တုအမည်သစ်ကိုရသောသူအခဲ့သည်, နှင့်မဿိ.
1:24 ဆုတောင်း, သူတို့ကဆိုပါတယ်: "သင် May, အိုထာဝရဘုရား, အဘယ်သူသည်လူတိုင်း၏စိတ်နှလုံးသိတယ်, သငျသညျရှေးခယျြသောဤနှစ်ခုထဲကတစ်ခုထုတ်ဖေါ်,
1:25 ဒီဝန်ကြီးဌာနနှင့်တမန်တော်အတွက်နေရာတစ်နေရာယူ, ယုဒ prevaricated ရာမှ, မိမိအရပ်သို့သွားစေခြင်းငှါဒါကြောင့်။ "
1:26 ထိုသူတို့ကသူတို့ကိုရည်မှတ်စာရေးတံချ, နှင့်စာရေးမဿိပေါ်မှာလှဲ. ထိုမင်းသည်တကျိပ်တပါးသောတမန်တော်တို့နှင့်ရေတွက်ခဲ့သည်.